Horonan-tsary: ​​Dingana 5 hahazoana fifandraisana tsara kokoa amin'ny daholobe | Martech Zone
Horonan-tsary: ​​Dingana 5 mankany amin'ny fifandraisana tsara kokoa amin'ny daholobe
Alatsinainy, May 5, 2014 Alatsinainy, 8 Jona, 2015 Jenn Lisak Golding
Ny namantsika manoloana ny Meltwater nanapa-kevitra ny hiala voly kely amin'ny Alatsinainy (sy Cindo de Mayo) ary namorona ity horonantsary fohy mahatsikaiky ity ho fahafinaretanay mijery. Mialà sasatra ary jereo!
Ny dingana 5 hahazoana fifandraisana tsara kokoa amin'ny daholobe
Farito ny fantsonao
Tantarao tantara maro
Aza tezitra raha maty ny iray amin'ny tantaranao
Zahao ity lahatsoratra bilaogy manaraka ity:
Dingana 5 hahazoana fifandraisana tsara kokoa amin'ny daholobe
Meltwater dia mpanohana an'i Martech Zone ary mampiasa ny fitaovan'izy ireo izahay hanaraha-maso ny resadresaka an-tserasera mandritra ny fivoaran'ny teknolojia marketing. Aza hadino ny mijery an'i Meltwater's fitaovana fanaraha-maso sosialy.
Tags: marika cowlinrano mitsonikaprpr videofifandraisana amin'ny vahoakahoronantsary momba ny fifandraisana amin'ny daholobe
Crittercism: Fanaraha-maso ny fahombiazan'ny fampiharana amin'ny finday
Mailjet mandefa fitsapana A / X miaraka amin'ny 10 Version